မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့ ရောက်ရှိ | Danya Wadi
»သတင်းများ»မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့ ရောက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့ ရောက်ရှိ
သံအမတ်ကြီး မာစီရယ်လ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကို ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်ကကြိုဆို ဧည့်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ရောက်ရှိရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်း၊ အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုဌာနအပြင် အမေရိကန်သံရုံးက အခြားသောဌာနခွဲတွေက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ထွန်းလာနေတဲ့ ဈေးကွက်အကြောင်း အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကို ပြသဖို့ပါ။ ဒါဟာ အရည်အသွေးမြင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းကြီးတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်သောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဒီအပြောင်းအလဲတွေက ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မြန်မာအစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တွေ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဟာ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ အစိုးရကဏ္ဍ ထဲက အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာတွေဆုံခဲ့ပြီး သံအမတ်ကြီးရဲ့နေအိမ်မှာ ဧည့်ခံပွဲကျင်းပခဲ့တာပါ။ ဒီအဖွဲ့ဟာ နေပြည်တော်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး အစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံကာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍဘယ်လိုနည်းနဲ့မြန်မြန်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းနဲ့ ပေါင်းစည်းနိုင် မလဲ ဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ambassador Marciel welcomed the U.S. Financial Services Mission to Myanmar on July 25. This mission is organized by AmCham Myanmar with support from the U.S. Commercial Service and other Embassy sections. The Mission aims to help develop Myanmar’s financial sector and expose U.S. companies to Myanmar’s emerging market. This is an opportunity for the Myanmar government and private sector representatives to understand changes needed to attract high-quality international firms, and the benefits these changes can bring to support inclusive economic growth in Myanmar. The mission held meetings in Yangon with private sector and key government stakeholders in the banking and insurance sectors culminating withareception at the Ambassador’s residence. It will continue to Naypyitaw for meetings with government officials to discuss how Myanmar’s financial sector can develop more quickly and integrate with the global economy.
← မဘသအဖွဲ့သည် ဥပဒေမဲ့ အဖွဲ့သာဖြစ်ကြောင်း မဟနဥက္ကဋ္ဌ ဗန်းမော်ဆရာတော် မိန့်ကြားပြီ
ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံး လေယဉ်တင် စစ်သင်္ဘောကြီး →